စိုင်းဆိုင်မောဝ် ~ SAI SENG SERK
Home » TAIFAMOUS » စိုင်းဆိုင်မောဝ်
11:51 AM 1 comment
၁၉၄၉ ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ အဘစိုင်းဘခိုင်၊ အမိဒေါ်အေးစိန် တို့က မူဆယ်မြို့မှာ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများကတော့-
(၁) စိုင်းကျော်စံ (ခေါ်) စိုင်းလောဝ်ဆိုင်
(၂) စိုင်းရွှေလှ (ခေါ်) စိုင်းလိန်ခမ်း
(၄) စိုင်းညွှန့်မောင် (ခေါ်) စိုင်းဆိုင်မောဝ်
(၅) စိုင်းတား (ခေါ်) စိုင်းလှိုင်းဆိုင်
(၆) နန်းသိန်းဟန် တို့ပါပဲ။
သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အနုပညာဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ပါ။ တောထဲ တောင်ထဲ သွားလည်တဲ့အချိန်၊ ရွှေလီမြစ်ကမ်းနံဘေး သွားလည်တဲ့အချိန်တွေမှာ သီချင်း မဟုတ်သေးတဲ့သီချင်းတွေကို သူ့ဖာသာ သူသီဆိုနေလေ့ရှိတယ်။ အဲဒါဟာ သူရဲ့ အနုပညာ မျိုးစေ့လို့ ဆိုရပါမယ်။ သူအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တုံးက သူ့ဦးလေးအိမ်မှာ ဂစ်တာ၊ အကော်ဒယံ၊ ဘာဂျာတွေနဲ့ သီချင်းဆိုနေကြတဲ့ စိုင်းထွန်းရင်၊ စိုင်းမောက်ခမ်းတို့အဖွဲ့ကို မကြာခဏ သွားချောင်းကြည့်နေတယ်။ အဲဒီတုံးက သူတို့တီးနေတဲ့ ဒရမ်ကတော့ ခရမ်းချဉ် သီးသေတ္တာပါပဲ။ သူတို့တတွေကတော့ ကွတ်ခိုင် (convent)ကျောင်းတက်ခဲ့လို့ ခေတ်သီချင်း တွေ သီဆိုတီးခတ်တတ်ကြတာပါ။
သူ့ကို ကလေးဆိုပြီး လာချောင်းကြည့်မှန်းသိတော့ သူ့ကို ဟောက်တယ်။ ကြောက် လို့ထွက်ပြေးရင်း ဖိနပ်သဲကြိုးတွေလည်း ပြတ်ခဲ့တယ်။ အကြိမ်းပေါင်းများစွာ ချော်လဲခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မရှိတဲ့အချိန် ဦးလေးဖြစ်သူကို ပြောပြီး သူဂစ်တာတီးချင်တဲ့အကြောင်း ပြော တော့ ဦးလေးက သူတို့မသိအောင် ဂစ်တာကိုင်ခွင့်ပြုတယ်။ အခန်းထဲ ဝင်ပြီး မတီးရဲတာ ကြောင့် ပြူတင်းပေါက်အပြင်ကနေပြီး အခန်းအတွင်းက ဂီတာကို ကိုင်ကာ မတတ်တတတ်နဲ့ ဂစ်တာစမ်းတီးနေမိခဲ့တယ်။ သူတို့လာပြီဆိုရင် ဂီတာလေးကို ချထား ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီး လှစ်ရတာတဲ့။ နောက်ပြီး မူဆယ်မှာ သူ့ထက်အသက်ကြီးသူတွေ ဂစ်တာတီးတာမြင်ရင် သွား ထိုင်ကြည့်တယ်။ ဂစ်တာအကွက်တွေကို မှတ်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်း ဂစ်တာတီးတတ် သွာတော့တယ်။
မူဆယ်မြို့မှာ မူလတန်းကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၅၈ မှာတော့ အဖိုးက စိုင်းလောဝ် ဆိုင်နဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို တောင်ကြီးသို့ခေါ်သွားတော့ တောင်ကြီးမှာ အမှတ်(၁) အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ အဖိုးဦးထမ်းရွက်ရဲ့ သူငယ် ချင်းဦးနန္ဒာတစ်ယောက် ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ အဖိုးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ အဖိုးက-
ဝင်လာပါ ဝင်လာပါ နေကောင်းရဲ့လား ဘယ်ကလာသလဲ
ကောင်းပါတယ်။ လင်းခေးက လာတာပါ။ နင်တို့ကော နေကောင်းလား
ကောင်းပါတယ်။ တောင်ကြီးကို ဘာကိစ္စကြောင့်လာသလဲ
ဒါက ကျွန်တော်ရဲ့ သားပါ။ သူ့ကို တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းထားချင်လို့။ အဆောင်မှာ သွားအပ်လဲ မရခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် အဆောင်မရခင် သူငယ်ချင်းဆီမှာ ထားဖို့ အကူအညီတောင်းချင်လို့ ရမလားမသိဘူး။
အဖိုး ဦးထမ်းရွက်အ ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး
ရပါတယ်။ အခုအချိန်မကူညီရင် ဘယ်အချိန်ကူညီရမှာလဲ။ သားနာမည်က ဘယ်လိုခေါ်သလဲ
ကျွန်တော် ရစ်ချတ်နန္ဒာပါ။ ငယ်နာမည်ကတော့ အိုက်တူး၊ ဗမာနာမည်ကတော့ စိုင်းတင်ဦးပါ ခင်ဗျား
ကောင်းပြီ ငါ့မြေးနှစ်ယောက်လည်း မူဆယ်ကနေ ဒီကိုကျောင်းလာတက်နေတယ်။ မင်းတို့ အဖေါ်ရတာပေါ့။
ဦးနန္ဒာလည်း သူ့သားကို ဦးထမ်းရွက်ထံမှာ အပ်ထားကာ ပြန်သွားတယ်။ တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူနေလာခဲ့ကြတဲ့ သူတို့က သုံးယောက်ကတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ရှမ်းအနု ပညာရှင်ကြီးများ ဖြစ်လာကြမည့် စိုင်းလောဝ်ဆိုင်၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ် နဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်တို့ပါပဲ။ ဝါသ နာတူကြတဲ့အတွက် ကျောင်းဆင်းချိန်၊ ကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ သူတို့အတူတကွ သီချင်းဆိုကြ တယ်။ ကျောင်းအာစရိယပူဇော်ပွဲမှာလဲ စိုင်းဆိုင်မောဝ်နဲ့ စိုင်းထီးဆိုင် အတူတကွ သီချင်းတွေ ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ညီရင်းအစ်ကိုလို ချစ်ခင်ကြတယ်။ သီချင်း အတူဆိုကြသလို သီချင်းအသစ်တွေကိုလည်း အတူတကွ ဖန်တီးကြတယ်။
စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကတော့ စမတ်ကျကျ လျှပ်စစ်ဂီတာတီးချင်လွန်းလို့ တီးဝိုင်းအစုံရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဌာနကိုသွားဖို့ စိုင်းထီးဆိုင်ကို ခေါ်ပေမယ့် စိုင်းထီးဆိုင်က မလိုက်ချင်ဘူး။ ဇွတ် အတင်းခေါ်မှသာ သူအားနာပါးနာနဲ့ လိုက်ဖြစ်တော့တယ်။ အဲဒီတုံးက သူတို့နှစ်ယောက် ငယ် နေသေးတော့ စတိတ်စင်ပေါ် တက်ခွင့်သီချင်းဆိုခွင့် မရခဲ့ဘူး။ ရလိုရနိုးနဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ လက်ဖက်ရည်ကို ငဲ့ပေးလိုက်၊ ထိုင်ခုံတွေကို ရွှေ့ပေးလိုက်၊ စီးကရက် သွားဝယ်ပေးလိုက်နဲ့ သူများသီချင်းဆိုတာကို စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်နဲ့သာ အခါခါမက်ခဲ့လေ တယ်။
စိုင်းနှစ်စိုင်းရဲ့ ပွဲဦးထွက် သီချင်းဆိုရတာကတော့ ကလောမြို့မှာပါ။ လျှပ်စစ်စက်ရုံ ဖွင့်ပွဲမှာ တောင်ကြီး ကိုဝင်းမြင့်တို့အဖွဲ့နဲ့ လိုက်သွားခဲ့တယ်။ အစမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဖုတ်လေတဲ့ ငါးပိ ရှိတယ်လို့တောင် ထဲ့မတွက်ထားဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာတော့ စတိတ်စင်အောက်ကနေ သူများဆိုတာကိုပဲ ရင်မောစွာနဲ့ အဖန်ဖန်အားကျနေမိတယ်။ ညဉ့်နက်လာတော့ ပွဲကြည့် ပရိသတ်လည်း တဖွဲဖွဲပြန်သွားကြတယ်။ ကလောမြို့က အေးလည်း အေးတာကိုး။ ကြည့်တဲ့သူနဲတော့ ဆိုတဲ့သူတွေလည်း သိပ်မဆိုချင်ကြတော့ဘူးပေ့ါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်က ကိုဝင်းမြင့်ဆီသွားပြီး သီချင်းစမ်းဆိုချင်တဲ့အကြောင်း တောင်းဆိုတယ်။ မျက်နှာငယ်လေး နဲ့နေမှာပါ။ ဆရာဝင်းမြင့်လည်း ကြည်သာစွာနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် ထီပေါက် သလို ပျော်ရွှင်မိတော့တယ်။ စတိတ်စင်ပေါ်တက် လျှပ်စစ်ဂီတာကြိုးကို ပုခုံးပေါ်ချိတ်၊ လေး တေးတေးနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ အရေးထဲ တစ်ယောက်က ဒီလိုလာပြော လိုက်သေးတယ်။
မင်းတို့နှစ်ယောက် ကောင်းကောင်းကိုင်၊ ဒီပစ္စည်းက တန်ဖိုးမနဲဘူးသိလား၊ ပျက်စီး သွားရင် မင်းတို့ရော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး . . . တဲ့
သူတို့နှစ်ယောက် ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီနောက် သူတို့စပ်ထားတဲ့ ဗမာသီချင်း တွေကို ရင်ခုံစွာနဲ့ ပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သီဆိုမှုကတော့ ပွဲသိမ်းသီဆိုမှုလို့ဆိုရပါမယ်။ ဆိုလဲပြီးရော ပွဲလည်းပြီးရောပါ။ စတိတ်စင်ပေါ် လျှပ်စစ်ဂီတာ ကြီးနဲ့ စတင်သီချင်းဆိုရလို့ အဲဒီည သူတို့နှစ်ယောက် အိပ်တောင်မပျော်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီည သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်က စာဖတ်သူတို့ သိချင်မှာပါ။ ဘယ်နေရာပဲ သီချင်းသွားဆိုဆို စာဖတ်သူတို့ မြင်ဖူးတာကတော့ စိုင်းနှစ်စိုင်းရဲ့ ပရိသတ်တွေ က ပွဲခင်းအပြည့်၊ လက်ခုပ်သံကလည်း မိုးထက်ညံ နောက်တစ်ပုဒ် နောက်တစ်ပုဒ်ဆိုတဲ့ အသံ လည်း ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ပဲ့တင်ထပ်နေခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ပရိသတ် ကတော့ ခုနစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်တဲ့။ အဲဒါက အနာဂတ်မှာ စိုင်းနှစ်စိုင်းအတွက် Lucky Sever ဖြစ်နေလေသလား။
အဲဒီကလောပွဲပြီးတဲ့နောက် တောင်ကြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန် သိပ်မကြာပါဘူး နိုင်ငံ ကျော်အဆိုတော်များဖြစ်ကြတဲ့ ခင်မောင်ညွှန့်၊ အကော်ဒယံအုန်းကျော်၊ စံရှားတင် (ရှမ်းတိုင်း ရင်းသူဖြစ်)၊ မာမာအေးတို့က တောင်ကြီး လူငယ်ရေးရာပွဲတော်မှာ သီချင်းလာဆိုကြတယ်။ တောင်ကြီးက အကော်ဒယံကိုသန်းရွှေက စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ အသံကိုနှစ်သက်သူဖြစ်လို့ သူတို့အဖွဲ့နဲ့ အတူ ခေါ်သွားတယ်။ မာမာအေးရဲ့ အသံကို စိုင်းဆိုင်မောဝ် သေချာစွာ စိတ်ဝင်စားမိခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုသန်းရွှေက စိုင်းဆိုင် မောဝ်အား ဗမာသီချင်း တက်ဆိုခိုင်းတော့ မတွေ့ကြရင်ကောင်းသား စတဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုဖြစ် ခဲ့တယ်။ ဆိုပြီးတာနဲ့ ခင်မောင်ညွှန့် မာမာအေးတို့က စိုင်းဆိုင်မောဝ်အနားမှာ ထိုင်စေပြီး ရန်ကုန်မှာ သီချင်းသွားသွင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ အဖိုးဖြစ်သူရဲ့ အုပ်ထိမ်းမှုအောက်မှာ နေနေတော့ မလိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
အဖိုးဖြစ်သူ ဦးထမ်းရွက်က ကုန်သည်ကြီးဖြစ်ပြီး သူ့ကုန်တင်ကားကြီးနဲ့ တောင်ကြီး တာချီလိတ်ကို ပြေးဆွဲတယ်။ တစ်ခါ ကားစပယ်ရာတစ်ယောက်က နေမကောင်းပြီး ကျန် တစ်ယောက်က မအားတာနဲ့ ကားလိုက်တဲ့သူ မရှိဖြစ်နေတော့ အဖိုးဖြစ်သူက စိုင်းဆိုင်မောဝ် ကို ကားဆရာအဖေါ်ရဖို့ တာချီလိတ်ကို လိုက်သွားခိုင်းတယ်။ ကားပေါ်မှာတော့ ရှမ်းတို့ဟူး ချဉ်၊ မုန်ညင်းချဉ်၊ နွားနို့ချောက်စတဲ့ ကုန်ချောက်တွေပါလာတယ်။ ဟိုခေတ်တုံးက တောင်ကြီး တာချီလိတ်လမ်းဟာ ကောင်ဘွိုင်နဲ့ သွားရတဲ့ခေတ်ပါ။ စစ်ကားတွေ အစောင့်အရှောက်နဲ့သာ သွားရတဲ့ခေတ်။ အချိန်မရွေး သွားလာလို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် ခရီးတစ်ခါထွက်ရင် ကားအစီး ပေါင်း ငါးဆယ် ခြောက်ဆယ်လောက် တခါတလေ အစီး (၁၀၀)ကျော်အထိ ရှိတတ်တယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်တော့ ဂစ်တာတစ်လုံးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ စပယ်ရာဘဝဖြစ်ခဲ့ပြီး တောင်ကြီးကနေ တာချီလိတ်ကို တစ်လနဲ့ ၁၈ ရက် ကြာခဲ့တယ်တဲ့။ တာချီလိတ်မှာတော့ မကာဟိုခမ်းရပ်မှ ဦးလေး (ဦးဆန်အေး) အိမ်မှာ သွားတည်းနေပြီး မနက် တာလော့ဈေးမှာ နွားနို့ချောက်တွေ သွားရောင်းတယ်။ အဲဒီအချိန် တာလော့ဈေးပတ်ပတ်လည်မှာ ရွာကနွားလည်းတွေ များသလား မမေးနဲ့။
ညရောက်တော့ ဦးလေးအိမ်ရှေ့နားက သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ ဂစ်တာတစ်လုံးနဲ့ သူသီချင်းသွားသွားဆိုတယ်။ နံနက်ပိုင်း တစ်နေ့ကျတော့ လူတစ်ယောက် ဦးလေးအိမ်ထဲ ဝင် လာကာ ညစဉ်လိုလို ရှမ်းသီချင်းသံကြားရတဲ့အကြောင်း၊ အရင်တုံးက ဒီလို မကြားဖူးတဲ့အ ကြောင်း သီချင်းဆိုတဲ့သူ ဘယ်သူလဲလို့ ဦးလေးကို လာမေးတယ်။ ဦးလေးကလည်း တောင်ကြီးက သူ့တူ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်။
အဲဒီလူ တာလော့ဈေးအထိ လိုက်လာပြီး စိုင်းဆိုင်မောဝ်အား ကျိန်းဟဲမှာ သီချင်း သွားသွင်းဖို့ စကားကမ်းလှမ်းလာတယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်လည်း လိုက်ချင်ပါရဲ့။ ပါလာတဲ့ နွားနို့ချောက်ကို ကုန်အောင်လည်းရောင်းရဦးမှာမို့ အဲဒီလူရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်လိုက် တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့အဖိုးနဲ့ ဦးလေးကို ခွင့်မတောင်းရရင်လည်း သူက မသွားရဲတာ ကြောင့် ငြင်းပယ်လိုက်တာပါ။ အဲဒီလူကလည်း မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်လိုက်တယ်။ စိုင်းရဲ့ နွားနို့ချောက်တွေကို သူအကုန်လုံး ဝယ်ယူလိုက်တော့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဦးလေး ကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် အကျိုးအကြောင်း သွားပြောပြတယ်။ ခွင့်တောင်းတယ်။ ဦးလေးဖြစ် သူလည်း သူ့တူတော်မောင်ရဲ့ အနာဂတ်တိုးတက်စေချင်လို့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ကျိုင်းဟဲအထိ လိုက်ပို့လိုက်တော့တယ်။ တောင်ကြီးက အဖိုးဆီကိုလည်း ဦးလေးက တာဝန်ယူပြီး ဖြေရှင်း ပေးလိုက်တော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်အတွက် စိုင်ကော်လို့ ချုံပေါ်ရောက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။
ဦးလေးက ကျိုင်းဟဲအထိလိုက်ပို့ပြီး တာချီလိတ်ကို ပြန်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန် ကျိုင်းဟဲရေဒီယိုက ရှမ်းဘာသာအစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး ဆဲင်ဆိုတဲ့ ရှမ်း ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေကို ညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေချိန်ပါ။ သူတို့က သူ့ကို သီချင်းဘယ်နှစ်ပုဒ်ရှိ သလဲ လို့မေးတော့ ဆယ်ပုဒ်လောက်ရှိကြောင်း ပြောပြတော့ ပွဲဦးထွက် စတူဒီယို သီချင်း စသွင်း ဖြစ်တော့တယ်။ သူ့ကို ကျိန်းဟဲအထိ မရမက ခေါ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ ကျိုင်းတုံက နန်းကောင်ခမ်း ပဲဖြစ်တယ်။ သွင်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ (ခမေ့်ခူင်း၊ ခူမ်သ၊မ်ခူမ်၊ ဂေု.ထုဂ်,တုပီ;) စတဲ့ ရှမ်းသီချင်းတွေပါ။ သီချင်းသွင်းခကတော့ ဘတ်ငွေ ၇၀၀ နဲ့ သူ့အတွက် အဝတ်အစားလှလှတွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။
သီချင်းသွင်းပြီးတော့ အဆိုတော်ရဲ့ နာမည် မရှိသေးဘူး။ သူ့နာမည်ရင်းက စိုင်းညွှန့် မောင်၊ ဗမာနာမည်ဖြစ်နေလေတော့ အခက်တွေ့နေတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း သူ့နာမည် သူ မပေးတတ်ဘူးဖြစ်နေတော့ နန်းကောင်ခမ်းနဲ့ ကျိုင်းဟဲအဖွဲ့က စိုင်းဆွမ်ယုတ် ဆိုပြီး ထိုင်းဆန် ဆန် နာမည်မှည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကျိုင်းဟဲမှာ ၇ ရက်ကြာခဲ့ပြီးနောက် တာချီလိတ်၊ တောင်ကြီး အထိ ပြန်လာခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သီချင်းသွင်းဖို့လည်း ကျိုင်းဟဲက ဖိတ်ထားတယ်။
သီချင်းသွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း စိုင်းဆွမ်ယုတ်သီချင်းတွေလည်း ကျိုင်းဟဲ ရေဒီယိုကနေ တဆင့် ညစဉ် ရှမ်းပရိသတ်နားထဲကို ထိုးနှက်ဝင်လေတော့တယ်။ အဲဒီအချိန် ရေဒီယိုလည်း သိပ်မပေါသေးတော့ စိုင်းဆွမ်ယုတ် ခေတ်သစ်သီချင်းလာပြီဆိုရင် ရေဒီယို ရှိတဲ့အိမ်မှာ သွားစု ပြီး နားဆင်ကြတယ်။ သူ့ရဲ့ ပွဲဦးထွက်သီချင်း ပွဲထွက်လှတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ သို့သော် စိုင်းဆွမ်ယုတ်ဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ မသိကြဘူး။ ခေတ်လူငယ်တွေကတော့ ခေတ်သီ ချင်းတွေကို ကြိုက်ကြပေမယ့် လူကြီးပိုင်းတွေကတော့ မကြိုက်ကြဘူး။ ဝေဖန်သံတွေ ကဲ့ရဲ့သံ တွေမျိုးစုံထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုတာ ဘယ်သူမှ တားလို့မရပါဘူး။
ခေတ်တစ်ခေတ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချက်ချင်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ စိတ်ရှည်စွာနဲ့ အချိန်ကို စောင့်ရပါမယ်။ ရှမ်းခေတ်သစ်သီချင်း ထွန်းကားလာဖို့အတွက် အချိန် တော်တော်ယူလိုက်ရသေးတယ်။ စိုင်းဆွမ်ယုတ် (ခေါ်) စိုင်းဆိုင်မောဝ် တောင်ကြီးပြန်ရောက် လာတော့ စိုင်းထီးဆိုင်အား သီချင်းသွားသွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းသာစွာနဲ့ ပြောပြတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်လည်း စိုင်းဆိုင်မောဝ်နဲ့အတူ သီချင်းသွင်းသွားဖို့ ကြိတ်ပြီး ကြံစည်နေတယ်။
စိုင်းလောဝ်ဆိုင်၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ စိုင်းထီးဆိုင် သူတို့သုံးယောက် ကျိုင်းဟဲမှာ သီချင်း သွားသွင်းဖို့ နမ့်စန်မြို့မှာ အချိန်းအချက်ပြုထားတယ်။ သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းကိုသွားဖို့ ကောင်ဘွိုင်ကားတွေ နမ့်စန်မှာ စုလေ့ရှိတယ်။ ကားထွက်ခါနီးအထိ စောင့်သော်လည်း စိုင်း ထီးဆိုင်ရောက်မလာခဲ့ပါ။ ကားထွက်သွားတဲ့အထိ စိတ်ပူစွာနဲ့ မျှော်လင့်နေသော်လည်း စိုင်းထီးဆိုင်တစ်ယောက် ရောက်မလာခဲ့ပေ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းအဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့လည်း နတ္ထိပါ။ ကျိုင်းဟဲရောက်မှ စိုင်းထီးဆိုင် လိုက်လာသော်လည်း ကားမမီသဖြင့် လင်းခေးလမ်းကနေ နယ်စပ်အထိလိုက်လာပြီး ယိုးဒယားဘက်ကို ဝင်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ သူပြန်လှည့်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် သီချင်း ၁၄ ပုဒ်သွင်းဖြစ်သွား တယ်။ လူသိများတဲ့သီချင်းတွေကတော့..
ယန်ကန်လှိုင်ဟွေ့လှိုင်လွယ် (စိုင်းဆိုင်မောဝ်နှင့် ဦးတန်းကေး)
နွမ်းဟန်လီ (စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရေးပြီး စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ ကော့ထုတ်တာပီ သီချင်းနဲ့ အလှဲအလှယ်လုပ်ထားတဲ့ သီချင်း)
ဘာ့ကြောင့် စိုင်းဆိုင်မောဝ်လို့ ခေါ်ရသလဲ
ဒီတစ်ခေါက်တော့ စိုင်းဆွမ်ယုတ်နာမည်ကို ပြောင်းပစ်ချင်တာနဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် ဆိုပြီး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရွေးလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့် အဲလိုရွေးရသလဲဆိုတော့ . . .
- ရွှေလီမြစ်ကို သောက်ခဲ့ရ ချိုးခဲ့ရလို့
- ရွှေလီဆိုတဲ့ နာမည်ကို တင့်တယ်စေလိုလို့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် (ဆိုင်= မြစ်ရေယာဉ် ကြော၊ မောဝ် = ရွှေလီဒေသ)
အဲဒီသီချင်းသွင်းပြီးတဲ့နောက် စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ သီချင်းဟာ ရှမ်းဒေသအနှံ ပျံ့သွားခဲ့တယ်။ သူနာမည် စိုင်းဆိုင်မောဝ်လည်း ရေပန်းစားသွားတော့တယ်။ အနု ပညာဝါသနာကြီးလွန်းတာကြောင့် ပညာရေးဘက်မှာ အားလျှော့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်တယ်။ သူနဝမတန်းအထိဘဲ ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၃ ခုမှာတော့ သူနန်းနွမ် မောဝ်(မူဆယ်)နဲ့အတူ ရန်ကုန် ပြည်လမ်းရှိ မြန်မာ့အသံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အစီအစဉ် မှာ ရှမ်းသီချင်းသွားသွင်းရပြန်တယ်။
တောင်ကြီး အထက (၄)မှာ ကျောင်းတက်တုံးက မိုးမိုးအေးနဲ့ စတွေ့ခဲ့တယ်။ သူမလည်း အနုပညာဝါသနာပါလေတော့ ပိုရင်းနီးမိတာပေါ့။ တောင်ကြီးတန်ဆောင် တိုင်ပွဲလည်ရင်း နောက်ပိုင်း မိုးမိုးအေးနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုမိသွားတယ်။ အဲဒီတုံးက စိုင်း ဆိုင်မောဝ် အသက် (၁၈)နှစ်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ရွှေသားမက်ကို ယောက္ခမက သိပ်မကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဝင်ငွေရအောင်ဆိုပြီး တက္ကစီကားမောင်းသော်လည်း ဝင်ငွေသိပ်မကိုက်။ ဒါကြောင့် ရွှေလိမ္မောအရက်ဆိုင်မှာ ကောင်တာသွားစောင့်ပေးတယ်။ သူများအရက်လာသောက်ရင် ငဲ့ပေးတယ်။ လိုအပ်တာ ကူပေးတယ်။ အရက် ဆိုင်ထဲ ရောက်လာတဲ့သူတွေ အများစုဟာ ဘဝပျက်သွားကြတာကို မြင်ရလို့ သူကိုယ်တိုင် အရက်ကို ရှောင်နိုင်အောင် အရက်ကျေးကျွန်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မိုးမိုးအေးနဲ့ အတူ နန်းခမ်းမိုင်ဆိုတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။
သမီးတစ်ယောက်ရလာတဲ့အချိန် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျောက်ကုန်သည် လုပ်ပြီး ယိုးဒယားမှာသွားရောင်းရင် ငွေတွေအများကြီးရမယ်ဆိုပြီး အထင်ရှိလို့ မိုးနဲ၊ လင်းခေး၊ ဝမ်ဟတ်လမ်းကနေ ယိုးဒယားကို ထွက်ခဲ့တယ်။ တောလမ်းမှာ ဦးမဟာဆန်းတို့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ တွေ့ပြီး သူတို့အဖွဲ့က ကုန်သည်တွေထဲမှာ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ပါလာကြောင်းသိတော့ ဦးမဟာဆန်းကို သွားပြောတယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ် နဲ့တွေ့ချင်ကြောင်း လာခေါ်တော့ လိုက်သွားရတယ်ပေါ့။ (၁၉၇၄-၇၅ လောက်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်) မဟာဆန်းက စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ ရှမ်းသီချင်းကို လွန်စွာကြိုက်သူဖြစ်တော့ ကောင်းမွန်စွာဧည့်ခံခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့ ကုန်သည်တွေ ခရီးဆက်ထွက်သော်လည်း ဦးမဟာဆန်းက စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို ခေါ်ထားသဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူ ခေတ္တနေဖို့ တောင်းဆိုလာတယ်။ မလိုက်လျောလဲ မကောင်းဆိုတော့ တောထဲမှာ နေလိုက်တော့တယ်။ တောထဲနေပေမယ့် ဂီတာတစ်လက်နဲ့ပါပဲ။ အပျင်းပြေ သီချင်း တွေဆိုတယ်။ မဟာဆန်းနဲ့အတူ မြင်းစီးရင်း သေနတ်ပစ်တာတွေ သင်ပေးတယ်။ တောပျော်ဘဝလို့ဆိုရလေမလား။ နောက်ပိုင်း ယိုးဒယားမှာ သီချင်းသွားသွင်းတော့ မဟာဆန်းကပဲ အကုန်အကျခံပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီသီချင်းကတော့ ဟိုတုံးက ဟိုတုံးက သီချင်းဖြစ်ပြီး စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး သီချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
စိုင်းဆိုင်မောဝ်နှင့် တောထဲက ထောင်နန်း
လူ့ဘဝဟာ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့မရဘူး။ တောထဲ မှာ နေတဲ့သူကတော့ တောကြောင်တွေနဲ့ တွေ့တတ်စမြဲပါ။ တစ်ခါက စဝ်ဟန်ဓမ္မထံ သွာလည်ပြီး အပြန်လမ်းမှာ တောတွင်း လက်နက်ကိုင် လောတွန်အဖွဲ့နဲ့ လာဆုံတယ်။ လောတွန်တို့က စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို ဗမာစုံထောက်ဆိုပြီး သူတို့စခန်းချတဲ့တောထဲကို ခေါ်သွားတယ်။ အမျိုးမျိုးသူ့ကို မသင်္ကာစွာနဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းတယ်။ နောက်ပိုင်း သူ့ကို မြေအောက်ထောင်နန်းတစ်ခုအတွင်း ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ တစ်နေ့နံနက် သေနတ်ဖောက်သံ သုံးချက်ကြားရတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူနဲအတူပါလာတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကို လောတွန်တို့အဖွဲ့ လက်စသတ်လိုက်တယ် ထင်မိလို့ပါ။ မကြာခင် သူ့အလှည့်ရောက်တော့မယ်လို့လဲ တွက်ထားမိတယ်။ သူနေတဲ့ မြေအောက်ထောင်ကတော့ အနက် ၁၈ ပေလောက် ရှိမယ်။ အကျယ်ကတော့ ရေတွင်းတစ်တွင်းလိုပေါ့။ ကိုယ့်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်အနံ့က ကိုယ့်ကိုပြန်နှိပ်စက်နေတော့တယ်။ ထမင်းစားချိန်ရောက်ရင် လူတစ်ယောက်က ဆွဲချင်းထဲ အစာတွေထဲ့လာပြီး အပေါ်ကနေချပေးတယ်။ မာတူးနေတဲ့ထမင်း အေးစက်နေတဲ့ ဟင်းတွေနဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်။ ဟင်းရည်နဲ့မျက်ရည်ရောပြီး သောက်ရတဲ့အဖြစ်ပါ။ သူအိပ်ဖို့အတွက် ဖျာစုတ်လေး တစ်ချပ်။ ညအိပ်တဲ့အချိန် လွတ်လပ်တဲ့ကောင်းကင်ပေါ်က ကြယ်ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အားငယ်မိ ဝမ်းနည်း မိတယ်။ ၇ ရက်ရလာတော့ သူ့ကိုသတ်ဖို့ စီစဉ်ချိန် မိုင်းပန်ကုန်သည်တစ်စုရောက်လာတယ်။ စကားစပ်မိလို့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာသိရတော့ မိုင်းပန်ကုန်သည်တွေက လောတွန်ဆီမှာ အကြောင်းမျိုးစုံ သွားပြောပြတယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ စုံထောက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်း၊ သူဟာ ရှမ်းနာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးမျိုးတောင်းပန်တော့ သူ့ကို ချက်ချင်း မသတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဦးမဟာဆန်းတို့အဖွဲ့လည်း စိုင်းဆိုင်မောဝ် အဖမ်းခံရကြောင်း ကြားသိရတော့ ဒေါသူပုန်ထပြီး လူသူလက်နက်တွေ များစွာနဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို လွတ်ပေးဖို့ လာတောင်းတယ်။ ရရင်ရ မရရင်ချမယ်ပေါ့။ လောတွန်အဖွဲ့လည်း အကြောင်းစုံကို သိတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်အား တောင်းပန်ပြီး ထောင်မှလွတ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက် ပြီး ငွေအထုတ်ကြီးတစ်ထုပ် ထပ်ပေးလိုက်တော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်က
ကျနော်အဖမ်းခံတာဟာ ခင်ဗျားတို့ ငွေကို လိုချင်လို့ လာအဖမ်းခံတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး သူပေးတဲ့ငွေကို ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် သူမဟာဆန်းတို့အဖွဲ့နဲ့လိုက်လာပြီး ဝမ်စစ်ရွာဘက်သို့ရောက်လာချိန် မြန်မာ့တပ်မတော်ဗိုလ်မှူးကောင်စစ်တို့လည်း စစ်ဆင်ရေးအရ ဝမ်စစ်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ ဗိုလ်မှူးကောင်စစ်က စိုင်းဆိုင်မောဝ် မဟာဆန်းအဖွဲ့ထဲရောက်နေမှန်းသိတော့ လူလွှတ်ပြီး ပြန်ခေါ်ခိုင်းတယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ ဗိုလ်မှူးကောင်စစ်ဟာ စိုင်းဆိုင်မောဝ် ဦးလေးတော်စပ်လို့ပါ။ မဟာဆန်း တို့က ငြင်းဆန်သဖြင့် သူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ကာ ပန်တဝိဘက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။
တောထဲအနေကြာလာတော့ တောင်ကြီးမှာ ကျန်ရစ်တဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးလေးကို လွှမ်းလာတယ်။ သူ့ဘဝလဲ လမ်းဆုံးနေတဲ့ ဒီတောထဲမှာ အမြုပ်မခံချင်ဘူး။ မဟာဆန်း တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုလည်း သူမနှစ်သက်ခဲ့ဘူး။ စတဲ့ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် စိုင်း ဆိုင်မောဝ်တစ်ယောက် ဦးလေးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကောင်စစ်ကို သတင်းပို့ပြီး လက်နက်နဲ့ အတူ အလင်းဝင်ခဲ့တယ်။
စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ ဘဝဟာ မရှိကို အရှိ မပျော်ကို အဖေါ်လုပ်ရတဲ့ဘဝလို့ ဆိုရင် လည်း မမှားပါဘူး။ သူ့သီချင်းကို နားထောင်ရင်တော့ သူအမြဲတမ်းပျော်တယ်လို့ ထင်ရ လောက်တယ်။ အမှန်တော့ အဲလိုမဟုတ်ပါ။ လူ့ဘဝဆိုတာ သာတစ်ခါ နာတစ်လှည့်ပါ။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဘဝမှတ်တိုင်ကတော့ စတိတ်ပေါ်ကနေ ထောင်ထဲတန်းရောက်သွားတာလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီလိုပါ . . . အလင်းဝင်လာပြီတဲ့နောက် တောင်ကြီးရှိ မိုးမိုးအေးတို့မိသားစုနဲ့ အတူ ပြန်လာနေတယ်။ အဲဒီနှစ် တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် စည်ကားစွာ ကျင်းပနေတဲ့အချိန်။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကတော့ လှပဆန်းကျယ်တဲ့ နေ့မီးပုံးပျံ၊ ညမီးပုံးပျံတွေကြောင့် အထူးနာမည်ကြီးခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲမှာ စိုင်းဆိုင်မောဝ် စတိတ်စင်ပေါ်မှာ သီချင်းတက်ဆိုခဲ့ရတော့ ပျော်နေဆဲအချိန်၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်ခုပ်သံကို ပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါ။ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ဆိုပြီးတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သွေးထိုးမှုကြောင့် စိုင်းဆိုင်မောဝ်မှာ စကားပြောစက်ရှိတယ်ဆိုပြီး သူ့ကို သက်ဆိုင်ရာက ခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီး လိုက်သွားရတယ်။ သူ့ခမျာ အနွေးထည်တောင် မယူအား ရှာဘူး။ တောင်ကြီး ရပခထဲရောက်သွားတယ်။ တပ်ပြေးများ ချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ သူ့ကို သွားထားတယ်။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ရဲ့ ပွဲသံတော်သံတွေ၊ အိုးစည်ဗုံမောင်းသံတွေ၊ ရွှေပွဲလာများ မီးပုံးပျံတက်သွားလို့ ပျော်ရွှင်အော်ဟစ်နေတဲ့အသံတွေ သူကြားသာကြားနေရတယ်။ သူက ဘာမှ မခံစားနိုင်တော့ပါဘူး။ အနုပညာသမားတစ်ယောက် ပွဲကြီးပွဲကောင်းနဲ့ လွှဲရတဲ့အချိန် သူ့ခမျာ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ဘဲ မျက်ရည် အကြိမ်ကြိမ်ဝဲခဲ့ရလေရဲ့။ အဲဒီတောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာလ တန်ဆောင်တိုင်ည ကိုလွှမ်းရင်း တောင်ကြီးဒီဇင်ဘာရဲ့အအေးဒဏ်ကြောင့် သူ့ဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ ဂုံနီအိတ် တစ်လုံးထဲ ဝင်ကွေးနေရတော့တယ် မိုးလင်းအထိ။ ဒီလိုနဲ့ အပြင်လောကကို သူနှစ်နှစ်လောက် ကင်းကွာသွားခဲ့ရတယ်။ ရပခမှာ နောက် တပ်မှူးအသစ်ရောက်လာမှပဲ သူ ပြန်လွှတ်လာတော့တယ်။ သူအကျဉ်းအကျပ်ထဲရောက်နေချိန် ဘယ်သူကမှ သူ့ဆီ မလာပေမယ့် သူ့ကို အမြဲလာအားပေးတာကတော့ မိုးမိုးအေးပါ။
အပြင်လောကထဲ ရောက်လာပြန်တော့ အလုပ်အကိုင်က ဟုတ်တိပတ်တိမရှိ သေးတော့ ဝါသနာအရ စနိုကာကစားပြီး စိတ်ဖြေနေရတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ဂီတစာဆို မောင်မောင်ညွှန့်နဲ့ ခင်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ကိုမြတ်လင်း(ရွှေညောင်တေးသံသွင်း)နဲ့ ခွန်ထွန်းပ (တောင်ကြီး)တို့က သူ့ကိုလာတွေ့ပြီး ရန်ကုန်မှာ သီချင်းသွားသွင်းဖို့ ကမ်း လှမ်းခဲ့တယ်။ အစကတော့ သူငြင်းလိုက်သေးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ လိုက်ဖြစ်သွား ပြီး ချစ်သောနန်းနှင့် ရှမ်းမောမြေ စီးရီးကိုသွင်းခဲ့တယ်။ (၁၉၇၈)
သူဆိုပြီးတာနဲ့ တောင်ကြီးကို အရင်ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူ့သီချင်း နာမည်ကြီးလာမယ်လို့ သူမထင်ခဲ့ဘူး။ သူ့ရဲ့ ဗမာပထမစီးရီး ဘယ်အချိန်ကထွက်သွားသလဲဆိုတာ သူသတိမထားမိခဲ့ဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံး သူ့သီချင်းတွေ ပေါက်သွားလေတော့တယ်။ လူတွေ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ချစ်ဇနီးလေးအေး နဲ့ ညောင်ညိုရိပ်အောက်က ချစ်စကား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူရဲ့ဒီစီးရီးကြောင့် စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဆိုတဲ့နာမည်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး သိသွားကြတယ်။့၁၉၇၆-၇၇ ရှမ်းတေးအမှတ် ၀၀၁၊ ၀၀၂၊ ၀၀၃ တွေထွက် ကတည်းက ရှမ်းပရိသတ်ထဲမှာတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်က နာမည်ရှိပြီးသားပါ။ မိုးမိုးအေး နဲ့အတူ နန်းခမ်းမိုင်၊ နန်းခမ်းမွန်ဆိုပြီး သမီးနှစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။ မိုးမိုးအေးတော့ သူတို့ကိုထားရစ်ပြီး စောစီးစွာ လောကက ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။
ပထမစီးရီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် စိုင်းဆိုင်မောဝ်လည်း နောင်သီချင်းသစ်တွေ ထပ်ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားလာတော့ ဆက်တိုက်လိုလို သူ့တေးသံတွေ ပရိသတ်နား စွဲသွားတော့တယ်။ သူ့သီချင်းတွေထဲမှာ တောင်ပြာတန်းကသိတယ် ဆိုတဲ့သီချင်းကတော့ ကြားရတဲ့သူတိုင်း အဲဒီတေးသွားနဲ့ စာသားကို နှစ်သက်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းကိုယ်တိုင် အဲဒီသီချင်းကို အရမ်းကြိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။
နန်းမွေဖေါင် နှင့် စိုင်းဆိုင်မောဝ်
အနုပညာလောကထဲမှာ ကျင်လည်ခဲ့ရင်း လားရှိုးမြို့မှာ သီချင်းလာဆိုတဲ့အချိန် မူဆယ်က နန်းမွေဖေါင်နဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ ခုမှာ နန်းမွေဖေါင်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကာ မူဆယ်မှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ်။ ရှမ်းသီချင်း မြန်မာသီချင်းတွေလည်း ဆက်တိုက် လိုလို သွင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကြုံရာအလုပ်လုပ်ရင်း ကုန်တင်ကားကြီးကိုလည်း သူတက် မောင်းခဲ့တာပဲ။ မူဆယ်မန္တလေးလမ်းကို အမြဲတမ်းသွားလာနေလေတော့ သူ့ခံစား ချက်ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် တင်ပြလိုက်သေးတယ်။ မူဆယ်နမ့်ခမ်းလမ်း တဲ့ ကားသမားတိုင်းလိုလို အဲဒီသီချင်းကို ကြိုက်ကြတယ်။ သူမူဆယ်မှာနေစဉ် ဗွီဒီယို ဇာတ်လမ်းခေတ်ထနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ သူနဲ့ နန်းမွေဖောင်က ဆန်မောက်ကွမ် မော်လတ်ကွမ်း (ချယ်ရီသာ စကားပြောတတ်ရင်) ဆိုတဲ့ ရှမ်းကားတစ်ကား ရိုက် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ နန်းမွေဖောင်နဲ့အတူ စိုင်းလှိုင်း၊ စိုင်းဇင်၊ စိုင်းမိန်းဆိုပြီး သားသုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့တယ်။ သူ့ဇနီး နန်းမွေဖောင်ကိုလည်း အနုပညာစင်မြင့်ပေါ် တင်ပေးကာ ရှမ်း၊ ဗမာသီချင်းတွေ အတူ ဆိုဖြစ်သေးတယ်။ သူ့ဇနီး နဲ့ပတ်သက် ပြီး လူသိများတဲ့ ရှမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ မွေနွမ်ဖောင် ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ ဖြစ်ပျက် ရကုန် ဆုံကွဲဆိုတဲ့အတိုင်း ၁၉၉၀ မှာ နန်းမွေဖောင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲခဲ့တော့တယ်။
နန်းမောက်စမ်ခမ်း နှင့် စိုင်းဆိုင်မောဝ်
နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ရဲ့ သတင်းကတော့ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ သာမန်လူထက်တော့ ပိုပြီးပျံ့မှာပဲ။ အဲဒါ ဓမ္မတာပါ။ စိုင်းဆိုင် မောဝ်ကွဲပြီ၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဇာတ်သိမ်းပြီ၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲပြန် ပြီ စသဖြင့် မကြားချင်လည်း နားထဲဝင်လာမစဲတသဲသဲပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ ဖူးစာ က နမ့်ခမ်းသူလေး နန်းမောက်စမ်ခမ်းတဲ့။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုတဲ့။ နမ့်ခမ်းမြို့ရဲ့ ဆင်ခြေ ဖုံးရွာလေးတစ်ရွာ မန့်နားဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီရွာရဲ့ တောင်ကုန်းကနေ လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက် ရင် ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းရဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ကြီး တမျှော်တခေါ် မြင်ရပြီး တရုတ်ပြည်ကနေ ကုန်ပစ္စည်း တွေ ဒီဘက်နိုင်ငံကို လယ်တောထဲဖြတ်ပြီး ဝင်လာကြတယ်။ လယ်တောထဲမှာ လှည်းလမ်း၊ ကားလမ်းတွေ ပေါက်နေတာမြင်ရတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်က ရှမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ် စပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ တယ်။ ခွန်တန်းကား မီးနိုင်းနား (လယ်ကွက်ထဲက ကားလမ်း)တဲ့။ သီချင်းတွေရေးစပ်ပြီး အပြန် နန်းမောက်စမ်ခမ်းတို့ အိမ်ကို ဝင်နား စကားစမြည်ပြော၊ ရင်းနီးသွားကာ နောက်ဆုံး ကြင် ဖေါ်ဖြစ်သွားကြတော့တယ်။
မကြာခင် နန်းမောက်စမ်ခမ်းနဲ့အတူ ဟတ်ဖတ်ယပ် ဆိုတဲ့ ရှမ်းစီးရီးတစ်ခွေ ထွက်လာ တယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်က နန်းမောက်စမ်ခမ်းကို စင်တင်ပေးတဲ့ စီးရီးလို့ဆိုရပါမယ်။ အဲဒီကစပြီး နန်းမောက်စမ်ခမ်းလည်း ရှမ်းနာမည်ကြီးအဆိုတော်အဖြစ် ယနေ့တိုင် ရပ်တည်လာခဲ့တော့ တယ်။ နာမည်ကျော်စုံတွဲအဆိုတော်ဖြစ်တော့ ဘယ်မှာသီချင်းသွားဆိုဆို နှစ်ယောက်စလုံး အဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့အတွဲ ရှမ်းပြည်မှာ တော်တော်နှံနှံစပ်စပ်ရောက်သွားကာ ပရိသတ်များကို သီချင်းနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ရတယ်။ တစ်ခါ တာချီလိတ်ဘက်က လာဖိတ်လို့ ရောက်သွားတယ်။ တာချီလိတ်ရောက်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံထဲ သွားရမယ်တဲ့။ လာရတဲ့ခရီးက လည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကနေ အရှေ့ပိုင်းအထိ တကူးတကလာရပြီး ဆက်မလိုက်သွားရင် လည်း မသင့်တော်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံထဲ လိုက်သွားတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲ ရောက်တော့ လာခေါ်တဲ့သူနဲ့ ခရီးဆက်ရင်းဆက်ရင်း ဟိုမိန်းဒေသကိုရောက်လာလေတော့ ပြန်ဆုတ်လို့လဲ မရတော့ဘူး။ ဆုတ်လည်းစူး စားလည်းရူးကိန်းဆိုက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က ဟိုမိန်းဒေသဟာ ခွန်ဆာရဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် MTA ဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်လည်း ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ပျော်အောင်နေဆိုသလို သူ့အနုပညာနဲ့ ဟိုမိန်းပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ကလေးနဲ့တွေ့ရင် ကလေးလိုတွေး၊ လူငယ်နဲ့တွေ့ရင် လူငယ်လိုပျော်၊ လူကြီးနဲ့တွေ့ရင် လူကြီးလိုပြောဆိုဆက်ဆံ၊ သူတောင်းစားနဲ့တွေ့ရင် သူတောင်းစားကို ခင်မင် တတ်ရမယ် တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ဟိုမိန်းမှာ ၂ နှစ်ကြာခဲ့တယ်။ သူနဲ့ နန်းမောက်စမ်ခမ်းတို့ရဲ့ ရှေ့ရေးကို ထည့်မတွေးလို့လည်း မဖြစ်တော့ နှစ်ဦးသား တီးတိုးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။ ဟိုမိန်းကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ဆိုလည်း လုံးဝမလွယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ သူနန်းမောက် စမ်ခမ်းကိုခေါ်ပြီး သေနတ်တိုတစ်လက်၊ ကျည်ဆံအချုို့နဲ့ ကယားပြည်နယ် လွယ်ကော်တပ် ရင်းမှာ အလင်းဝင်ခဲ့တယ်။
နန်းမောက်စမ်ခမ်းလည်း နာမည်ကြီး ရှမ်းအဆိုတော်ဖြစ်လာတော့တယ်။ သူမရဲ့အသံ ကလည်း ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတယ်လေ။ နန်းမောက်စမ်ခမ်းနဲ့အတူ နန်းဆိုင်ဖွန်ခမ်း ဆိုတဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက်ထွန်းကားတယ်။ မတည်မြဲတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ခရီးဟာလည်း မမြဲခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်းကွဲကာ လမ်းခွဲသွားကြတယ်။ အချစ်နဲ့အမုန်းဆိုတာ စက္ကူပါးပါးလေးလို ကြောချင်းကပ်နေတဲ့အရာပါ။ တချို့ကစိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို အပြစ်တင်ပြီး မျက်နှာများတယ်၊ တစ်ယောက်ချစ် တစ်ယောက်ပစ်လို့ပြောချင်ပြောမယ်။ ဒါကတော့ ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်ပေါ်မူတည်တာပါ။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုပစ်ခွာသလဲဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အတိအကျမသိနိုင်ဘူးထင်တယ်။
တစ်ခါတုံးက ဦးပဇင်းတစ်ပါး လူထွက်ပြီး မိန်းမခိုးပြေးလို့ အဲဒီသတင်း ဟိုးလေးတ ကျော်ဖြစ်သွားတယ်။ စာရေးသူရဲ့ သူငယ်ချင်းဦးဇင်းတစ်ပါးက ကားစီးရင်း အဲဒီသတင်းကို ကားပေါ်က နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားနေရတော့ သတင်းထက် အတင်းက ပိုကဲနေသလို ခံစား ရတယ်တဲ့။ ပြောလာတိုင်း တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ဦးပဇင်းလူထွက်က မိန်းမခိုးပြေးတယ် တဲ့တော် ဆို ပြီး အားရပါးရ ကားပေါ်မှာ ဟားတိုက်ပြီး အမျိုးသမီးကြီးတစ်စုက ရယ်နေတယ်။ ကားပေါ် ပါလာတဲ့ ဦးပဇင်းက နားပူတာနဲ့ သူတို့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး
နေဦး ဒကာမကြီးတို့ နင်တို့ပြောတာက ဟိုလူထွက်ကိုယ်တော်က မိန်းမခိုးပြေးတယ် ဟုတ်လား
ဟုတ်မှဟုတ် ဟား ဟား ဟိ ဟိ
ဦပဇင်းမေးစရာရှိတယ် (၁) ဟိုလူထွက်က မိန်းမကို ခိုးပြေးတာလား (၂) ဟိုမိန်းမက ဟိုလူထွက်ကို ခိုးပြေးတာလား (၃) သူတို့နှစ်ယောက် သဘောတူလို့ အတူတူ ခိုးပြေးတာလား အဲဒါ ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်မလဲ ဖြေပါဦး
အဲဒါတော့ တပည့်တော်မတို့ အတိအကျမပြောတတ်ဘူးဘုရား
အတိအကျမသိရင် ဘာဖြစ်လို့ ဦးပဇင်းလူထွက် မိန်းမခိုးပြေးနေတယ်လို့ချည်းပြော နေသလဲ
ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်တော့မှ ကားနောက်ခန်းစီးတဲ့သူတွေ ငြိမ်သွားတော့တယ်တဲ့။
စိုင်းဆိုင်မောဝ် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ယူယူ ပစ်ပစ် လုပ်နေတာကကော သူက ဟိုတစ်ယောက်ကို ပစ်ခွာတာလား၊ ဟိုတစ်ယောက်က သူ့ကို ပစ်ခွာတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဦး သဘောတူ ပစ်ခွာကြတာလားဆိုတာ မေးရမလို အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း သူက ဟိုတစ်ယောက်ကို ချစ်သလား၊ ဟိုတစ်ယောက်က သူ့ကို ချစ်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဦးသား ချစ်ကြလို့လားပေါ့။ ဆိုလိုတာက သတင်းဟာ သတင်းပဲဖြစ်သင့်တယ်။ သတင်းက နေ အတင်းဖြစ်ရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ နန်းမောက်စမ်ခမ်းနဲ့ ကွဲပြီးတဲ့နောက် စိုင်းဆိုင်မောဝ် သီချင်းဆို သီချင်းရေးမပျက်ပါဘူး။
လောဝ်လောဝ် နှင့် စိုင်းဆိုင်မောဝ်
၁၉၉၈ သူ့ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူ ဆစ်ဆောင်ပန်းနား၊ ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ်ဘက် ကို သီချင်းသွားဆိုတယ်။ တာချီလိတ်မှာ အခြေချပြီး ပရိသတ်ကို ညစဉ်ဖျော်ဖြေပေးချိန် အမည်မသိ သီချင်းတောင်းသူတစ်ဦးကတော့ ညစဉ် သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲကို လာတောင်းတော့ ညစဉ် အဲဒီသီချင်းကို ဆိုပြရတယ်။ အဲဒီရှမ်းသီချင်းကတော့ (ဂ၊မ်,တူဂ်းလိုခေ်း = အချိန်နောင်း နဲ့ကံ)ပါ။ စုံစမ်းကြည့်တော့ သီချင်းတောင်းတဲ့သူက လောဝ်လောဝ်ဆိုတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ အဲဒီကစပြီး လောဝ်လောဝ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ပြန်တယ်။
စိုင်းက လောဝ်လောဝ်ကို လက်ထပ်သလား
လောဝ်လောဝ်က စိုင်းကို လက်ထပ်သလား
နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ထပ်သလား ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ လောဝ်လောဝ်နဲ့အတူ ယိင်းအွမ်စံတစ် ဆိုပြီး သမီးလေးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။
နိုင်ငံကျော် ရှမ်းအဆိုတော်ထဲမှာ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးလို့ဆိုရပါ မယ်။ ခေတ်သီချင်းတွေ မျိုးစုံထွက်လာခဲ့သော်လည်း ရှမ်းသီချင်းတွေထဲမှာ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေဟာ သစ်လွှင်နေဆဲပါ။ အသစ်တွေလည်း လန်းဆန်းနေဆဲပါ။ ရှမ်းစီရီးခွေ ပေါင်း (၄၀)ကျော်၊ ဗမာသီချင်းခွေပေါင်း (၃၀)ကျော်ထွက်ခဲ့ပြီး ရေးသားထားတဲ့ ရှမ်းသီချင်း ပုဒ်ရေ (၂၀၀)ကျော်၊ ဗမာသီချင်း ပုဒ်ရေ (၁၀၀)ကျော်လောက်ရှိမယ်။
Live Show ခေတ်ရောက်လာတော့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်လည်း Live Show နဲ့ သူ့ပရိသတ် ကို တင်ဆက်ခဲ့လို့ သီချင်းဟောင်းတွေလည်း ပြန်လည်သစ်လွှင်လာခဲ့တယ်။ ပရိသတ်စိတ်ဝင် တစားရှိခဲ့တာကတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝမှတ်တိုင် Live Show ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ စိုင်းထီးဆိုင် နဲ့ အတူတွဲလုပ်တဲ့ Live Show စိုင်းနှစ်စိုင်း ပါ။ တချို့ကပြောနေကြတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ မတည့်ကြဘူးတဲ့။ အဲဒါ မမှန်ပါဘူး။ သူတို့နှစ်ယောက်က ငယ်ပေါင်းရောင်း ရင်းတွေပါ။ တောင်ကြီးအဖိုးအိမ်မှာ အတူတူနေ အတူတူစား အတူတူသွားခဲ့သူတွေပါ။ ရှမ်းသီ ချင်း နွမ်းဟန်လီ ဟာ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ရေးပြီး စိုင်းထီးဆိုင်ကို လက်ဆောင်ပေးသလို ရှမ်းသီချင်း ကော့ထွတ်တာပီ ဟာ စိုင်းထီးဆိုင်ရေးပြီး စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကို လက်ဆောင်ပေးထားတာပါ။ အတင်းတွေ ဘယ်လိုပြောပြော စိုင်းနှစ်စိုင်းရဲ့ Live Show ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ညီရင်းအစ်ကိုလို ချစ်ခင်ကြောင်း သက်သေပါ။ အတင်းတွေက အချင်းချင်းကို သွေးကွဲအောင် လုပ်တတ်ကြောင်း သတိထားသင့်တယ်။ တချို့က ဒီလိုထပ်ပြောသေးတယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ် နဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း မတည့်ဘူးတဲ့။ အဲဒါလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်ကြီးမှာ နေစဉ်က စိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ သူတို့စတွေ့ စခင်ပြီး စိုင်းနှစ်စိုင်းကို စိုင်းခမ်းလိတ်က သီချင်းဆိုသင်ပေး သေးတယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းတွေများစွာ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဆိုထားလေတော့ သူတို့ မတည့်တာတွေဟာ ကောလာဟာလတွေပါ။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်တို့ရဲ့အဖိုး ပူထမ်းရွက်ရဲ့ ဇနီး နိုင်းစင်(ဆေးခွန်)နဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်တို့ရဲ့ အဖေ လုံးစရေးခမ်းကာနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ဆွေမျိုးဖြစ်ပြီး ပျဲန့်မျိုးရိုးတွေပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ စိုင်းထီးဆိုင်ဟာ ရှမ်းအနုပညာ နှလုံးအိမ်လို့ဆိုရမှာပဲ။ တစ်ယောက်အကြောင်းပြောရင် ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက်အကြောင်းက မပါလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့သုံးယောက်ဟာ နာမည်လည်း တွဲနေသလို၊ စိတ်ဓါတ်တွေ လဲ မခွဲဘဲ သူတို့သီချင်းကလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲနီးစပ်စေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ် ဓါတ်ကလည်း မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ဆရာထက် လက်စောင်းထက်တဲ့ တပည့်တွေ များစွာ လိုလားလျက်။
နာမည်ကျော် အဆိုတော် စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ ဘယ်နေရာပဲ သီချင်းသွားဆိုဆို မိမိဟာ ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပဲပုပ်လေးကျွန်တော် ပုံရိပ်ကို အမြဲတမ်းပြသပေးလျက်ပါ။ သူဆိုတဲ့ စီရီးတွေထဲမှာလည်း ကြာညှပ်ပြီးတော့ ရှမ်းသီချင်းတွေ ထည့်ဆိုသွားတာကလည်း အဝေး ရောက် ရှမ်းပြည်သားများအတွက် လွှမ်းချင်းလို့ဆိုရလေမလား။ သူဟာ ဘယ်နေရာရောက် ရောက် ရှမ်းပဲပုပ်အတွက် အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူနေသူပါ။
စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ သူ့ရဲ့သီချင်းသံနဲ့ ရှမ်းလူထုပရိသတ်များအတွက် ပျော်ရွှင်အောင်၊ ကြည်နူးအောင်၊ ရွှင်မြူးအောင် သူ့ရဲ့ အနုပညာနဲ့ ကာလရှည်ကြာစွာ တင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက် ပင်လုံမြို့၊ ပိဋကတ်ရှမ်းဘာသာပြန်အဖွဲ့ချုပ်က နှစ် ၅၀ ပြည့် ရွှေရတုသဘင် ပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါ လ စာပွဲတော်မှ ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုကို ၁၃၇၀ ပြည့် ကဆုန်လဆန်း ၁၃ ရက်နေ့ (၁၇၊ ၅၊ ၂၀၀၈) မှာ ဆုတံဆိပ်နှင့်အတူ ဆုငွေကျပ်ဆယ်သိန်း ချီးမြှင့်ခဲတယ်။ စိုင်းဆိုင်မောဝ်ကိုယ် တိုင် ဆုကို တက်ယူတဲ့အချိန် ရွှေရတုပွဲ ရွှေပရိသတ်များရဲ့ လက်ခုပ်သြဘာသံဟာ မိုးထက် ဘဝဂ်ညံသွားလေတော့တယ်။ ယခု စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်ပြီး သူ့အနုပညာနဲ့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်များကို ဖျော်ဖြေပေးလျက်ပါ။ မြန်မာပြည်အနှံ့ ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့အတူ တေးသီချင်း တွေနဲ့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေပေးလျက်ပါ။
ရှမ်းအနုပညာရှင်ထူးချွန်ဆုရ စိုင်းဆိုင်မောဝ်တစ်ယောက် ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိရဲ့ အနုပညာဖြင့် အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်အတွင် သမိုင်းမှတ်တိုင် လှလှရေးထိုးနိုင်ပါစေ ကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်) ဒီအကြောင်းတွေကို စိုင်းဆိုင်မောဝ်အား ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းပြီး ရေးသား ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၉ ခု ရွှေရတုပုံရိပ် မဂ္ဂဇင်းမှ ရှမ်းစာရေးဆရာ ဟိုင်းဆေခိုင်၏ စာမူကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ထားသည်။
Get from: Sao Su Kham
.thank u so much for ur post..
လည်ချောင်းနာချိန် သက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်နည်းများ
ရှမ်းစော်ဘွား အဆက်ဆက် ကိုးကွယ်လာခဲ့သော ခန္ဒာကိုယ်ပေ...
အင်တာနက် မလိုဘဲ Ytalk Sofware ဖြင်.ဖုန်းဆက်သွယ်နိုင်
Facebook New Privacy
အင်တာနက်လိုင်းမရှိဘဲ VoIP ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီ
WINDOWS7၏အားနည်းချက် (၁၀)ချက်
သံပရာသီးဖြင်. ခြင် နှိမ်နှင်းနည်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook အသုံးပြုသူ ၁ သန်း ၄သောင...
အမျိုးသမီးများအတွက် အန္တာရယ်ကြီးသော ကိုယ်ပျောက်လူသတ...
မယားကောင်းဆိုတာ အိပ်ယာထဲမှာသစ်တုံးလို ကျောက်ရုပ်လိ...
ရင်သားထွားချင်သူများ ဖတ်ဖို. ဗပာုသုတ
ကျားပောာ်မုန်းများခြင်းက အသက်တိုခြင်းနှင် ဆက်စပ်နေ
သားအိမ်ကင်ဆာကို ခွေးဖြင်.အနံ.ခံခိုင်းပြီး သိနိုင်ပ...
Teenage Pregnancy အသက်ငယ်ငယ် ကိုယ်ဝန်လွယ်
လူ.ခန္ဒာကိုယ်ရဲ. ထူးဆန်းအံ.သြဖွယ်အချက်အလင်များ မှတ်...
အမျိုးသမီးများ ကားမောင်းပါက သားအိမ်ထိခိုက်နိုင်ပာု...
အစိမ်းရောင် လေ.ကျင်.ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင်. ကျန...
KBZ လေယဉ်သစ် ဖွင်.ပွဲ
* SSPP/SSA ရှမ်းပြည်နယ်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း စစ်ရေ...
SSNA ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသားတပ်မတော်ခေါင်းဆောင် စ၀်က...
RCSS/SSA စစ်ရေးလုပ်ရှားမူနှင်. လေ.ကျင်.မူများ
စ၀်ယွတ်စစ် ရှမ်းပြည်နှင်. ဗမာပြည်ခရီးစဉ် မှတ်စုံဓာ...